टिप्स एण्ड ट्रीक्स Archives - Page2of6- Living with ICT
Home / टिप्स एण्ड ट्रीक्स (page 2)
एन्ड्रोइड स्मार्टफोन प्रयाेगकर्ताका लागि अाफ्नाे डिभाइसकाे ब्याट्री टिकाउन निकै मुस्किल पर्ने गर्छ । ब्याट्रीको लाइफ बढाउन विभिन्न उपाय नखोजिएका पनि होइनन् । र पनि यस्तो समाधान त्यति भएको पाइदैन । यहाँ हामीले यस्ता टिप्स फेला पारेका छौं, जसले तपार्इंको ब्याट्री लाइफ बढाउन सक्छन् । यो टिप्स फेला पार्न एन्ड्रोइड फोनका लागि मात्र लागू हुने ११ किसिमका टिप्स यसप्रकार छन् : …
प्रिन्टर किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुराहरू ध्यान दिनुहाेस्
विभिन्न कार्यविशेषका लागि फरकफरक प्रविधिमा आधारित धेरै प्रिन्टिङ प्रविधि अहिले उपलब्ध छन् । घरेलु प्रयोजन, साना ट्राभल कम्पनीदेखि विभिन्न काम गर्ने ठूला कम्पनीहरूले काम तथा प्रयोगको प्रकृतिअनुसार प्रिन्टरहरू प्रयोग गर्ने गर्दछन् । यसैगरी, थुप्रै आकारमा आउने प्रिन्टरहरूमा फोटोग्राफरदेखि मल्टिटास्किङ गर्ने प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गरी उत्पादन गरिएका पाइन्छन् । यसर्थ तपाईंले कस्तो किसिमको प्रिन्टर रोज्ने भन्ने कुराको निर्धारण पनि तपाईंको आवश्यकतामा नै …
एटीएम कार्डको डाटा तथा पिन चोरिन बाट कसरी बच्ने ?
पछिल्लो समय एटीएम कार्डबाट डाटा र पिन नम्बर चोरी गरी अवैध रुपमा रकम निकाल्ने गिरोह सक्रिय रहेको भेटिएको छ । सोमबार केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले पत्रकार सम्मेलन गर्दै एटीएम ह्याकमा संलग्न तीन जना रोमानियन नागरिक पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ । यसअघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले नेपाललाई केन्द्र बनाउँदै यस्ता गतिविधि गर्दै आएकोमा पछिलो घटनाले नेपालका बैंक खातामा रहेको रकम एटीएम बुथबाट हराउने …
सुत्दा विस्तारामै मोबाइल राख्नुहुन्छ ? होसियार ! खतरानाक ग्याँसको शिकार हुनुहोला
तपाई हामी अधिकांशले अब मोबाइल बिनाको जीवन कल्पनै गर्न सक्दैनौं । विहान उठेदेखि हरेक पल मोबाइल साथमै हुन्छ । इलेक्ट्रोनिक्स सामान जुनसुकै बेला पनि खतराको संकेत हो, तर तपाईले संयमित भएर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यसबाट सम्भावित जोखिमबाट धेरै हदसम्म बच्न सक्नुहुन्छ । पछिल्लो एउटा अध्ययनले मोबाइललाईराती सँगै लिएर सुत्दा खतरा हुने हुने निष्कर्ष निकालेको छ । चीनमा गरिएको यस्तो अनुसन्धानले …
कसरी किन्ने राम्राे पावर ब्या‌ंक ? (सम्पूर्ण जानकारीसहित)
अर्जुन सापकाेटा । बोक्न मिल्ने (पार्टेबल) पावर ब्यांकमा खास ब्याट्रीको प्रयोग गरी विद्युतीय उर्जाको प्रवाह नियन्त्रण गर्न विशेष सर्किटको प्रयोग गरिएको हुन्छ । यिनको मद्दतले विद्युतीय उर्जा भण्डारण गर्न (ब्यांकमा बचत गर्न) र पछि आवश्यक परेको बेला मोबाइ डिभाइसलाई चार्ज गर्न (ब्यांकबाट झिक्न) सकिन्छ । पावर ब्यांक मूख्यत तपाईले प्रयोग गर्नुहुने मोबाइ डिभाइसको ब्याट्री सकिएरै समस्यामा पर्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले …
१. धेरै सस्तोको पछि नलाग्नुस् धरै सस्तो फानको पछि नलाग्नुस् । आफूले किन्न सक्ने फोन लिएको राम्रो । किनीसकेपछि केही लामो समयसम्म टिक्ने फोन किन्दा नै बेस हुन्छ । संभव भएसम्म फोनको अर्को अपग्रेड नआउन्जेल काम गर्ने गुणस्तरिय क्यामेरा र प्रोसेसर भएको लिनुपर्छ । त्यसैगरी ब्याट्रीको क्षमता पनि हेनुहोस् । उच्च क्षमताका फोनहरु जस्तो आइफोन सिक्स वा सामसुङ एस फाइभ …
एन्टिभाइरस खरिद गर्नुअघि ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुराहरु
१. माल्वेरको पहिचान सबैभन्दा खतरनाक माल्वेरहरुमा भाइरस र वार्म (worm) हरु पर्दछन् । यसैगरी, लुकेर बस्ने माल्वेरहरुमा रुटकिट र टोर्जन हर्सेसहरु रहेका छन् । यिनीहरुले लुकेर बस्नेभएकाले कम्प्युटर युजरले पत्ता लगाउन नसक्ने किसिमका हुन्छन् । दिनहूा नयाा नयाा भाइरसहरुको आइरहने हुनाले एउटा राम्रो एन्टिभाइरले समेत यस्ता माल्वेर पत्ता लगाउन असक्षम पनि हुन सक्न । यसर्थ राम्रो माल्वेर पहिचान गर्न सक्ने …
Aug 6, 2016	0
एन्टिभाइरस प्रयोग गर्नु पर्ने धेरै कारणहरु रहेका छन् । इन्टरनेट प्रयोग गर्ने युजरहरुलाई त एन्टिभाइरस तथा इन्टरनेट सेक्युरिटी अनिवार्य भइसकेको छ । एन्टिभाइरस सफ्टवेर प्रयोग नगरिएका कम्प्युटरमा टोर्जनजस्ता भाइरसले युजरका इमेल अड्रेस र पासवर्ड चोरी गरेर बैंक अकाउन्ट ह्याक गर्न तथा रकम चोरी गर्न सक्दछन् । त्यसैगरी, र्यान्समवेर (Ransomware) अथवा त्यस्तो भाइरसजन्य सफ्टवेर हो जसले निसाना बनाएको कम्प्युटर सिस्टमलाई ब्लक …
आइटीमा यसरी करिअर सुरु गर्नुहोस्
धरै मानिसले सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई मन पराउँछन् । पछिल्लो समय आइसिटी क्षेत्रमा लाग्ने युवापुस्ताको संख्या पनि दिनानुदिन बढ्दो छ । तर कतिपयलाई यस क्षेत्रमा कसरी करिअर बनाउने भन्ने जिज्ञासा भइरहेको हुनसक्छ । यसै कुरालाई मध्यनजरमा राखेर लिभिङ विथ आइसिटीले यस क्षेत्रमा लाग्न चाहने जनशक्तिलाई केही टिप्सहरु प्रस्तुत गरेको छ । चरण १. तपाइमा पहिल नै आइटीको सिप छ वा छैन …
अधिवक्ता बाबुराम अर्यालसँग ‘साइबर जिज्ञासा र समाधान’
लिभिङ विथ आइसिटीले साइबर क्राइम वा यससँग सम्बन्धित कानुनी पक्षहरुको बारेमा पाठकको जिज्ञासा समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ । यसको लागि यसै क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील आइटी विज्ञ एवं अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले जिज्ञासा समाधान गर्ने प्रयास गरेका छन् । तपाइसँग पनि यस्ता केही जिज्ञासाहरु छन् भने हामीलाइ इमेल वा एसएमएस गर्नुहोस । हाम्रो इमेल ठेगाना livingwithict@gmail.com रहेको छ । एसएमएस …